ဒီနေ့တော့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောဖွင့်မေး ဖို့ အချိန်တန်ပြီ မို့ ဒီ Post ကို တင်ပါတယ် …ဒီ Post ကြောင့် ထိခိုက် နစ်နာသွားသူများရှိလျှင်လည်း တခါထဲ တောင်းပန်ထားပါမယ် – Na Pann San
ဒီနေ့တော့ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောဖွင့်မေး ဖို့ အချိန်တန်ပြီ မို့ ဒီ Post ကို တင်ပါတယ် …ဒီ Post ကြောင့် ထိခိုက် နစ်နာသွားသူများရှိလျှင်လည်း တခါထဲ တောင်းပန်ထားပါမယ်
အများ သိအောင် share ပေးကြပါ ။ ကျနော်မေးတာတွေလည်းဖြေနိုင်သူများဖြေပေးကြပါခမျာ။
ဒီနေ့တော့ အမှန် ကို အမှန် အတိုင်းဖွင့်ပြောဖွင့်မေး ဖို့ အချိန်တန်ပြီမို့ ဒီ Post ကိုတင် ပါတယ်… ဒီ Post ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာသွားသူများ ရှိလျှင်လည်း တခါထဲတောင်းပန်ထားပါမယ်….
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Covid-19 positive လူနာကို ချင်းပြည်နယ်၊တီးတိန်မြို့နယ်၊ကပ်တဲလ်ကျေးရွာတွင် ကျနော် ဒေါက်တာဖြိုးကျော် ​၏ UHC clinic မှ 19/3/2020 ရက်နေ့တွင်စတင်တွေ့ရှိ ခဲ့ ပါတ ယ် ။
၎င်း ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပဲ တီးတိန် TMO ထံသတင်းပို့ပေးခဲ့ပါတယ် ။ တီးတိန် TMO ​၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လူနာကို Home Quarantine ထားခဲ့ပါတယ်။21/3/2020 တွင် တီးတိန်ဆေးရုံ သို့ လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ပြီး ဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာ 23/3/2020 ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန​၏ အဖြေအရ လူနာတွင် Covid-19 ပိုးတွေ့ရှိရကြောင်းသိရှိရ ပါ သည် ။
ထိုလူနာ Positive ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း Home Q. (၁၄) ရက်ကို ကလေးမြို့နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ ကပ်တဲလ်ကျေးရွာ ကိုလည်း အစိုးရက Lock down ချမှတ်ပြီး ရွာကိုအဝင်အထွက်ပိတ်ထားလိုက် ပါသည် ။ Positive လူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများကိုလည်း ကျန်းမာရေးဌာန မှ Home Q. (၁၄) ရက်စီချမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထို Home Q. (၁၄) ရက်စီ ချမှတ်ပြီးသော်လည်း ကျနော်အပါအဝင် Positive လူနာနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူ Closed contact များအား swab test လုပ်ခြင်းတစုံတရာမပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါ။ ကျနော်သည် Home Q. (၁၄) ပြည့်ပြီး အိမ်အပြင် ထွက်ခွင့်ရနေသော်လည်း ကျနော့ကို မည်သည့် ဆေးစစ်ဆေးမှုကိုမျှမပြုလုပ်ပေးထားသောကြောင့် မိမိ မိသားစုထံကိုတောင် မပြန်ရဲသေးပါ။ ထို့နည်းတူပဲ ရွာမှ Home Q. ယူနေသူ (၃၆) ယောက် ကိုလည်း ဆေးစစ်မှုတစုံတရာမပြုလုပ်ထားပါဘဲ ရောဂါကင်းရှင်းသည်ဟုဆိုကာ မနက်ဖန် 7/4/2020 နေ့တွင် Home Q. ဖြုတ်ပေးပါတော့မည်။ ထိုသူများသည် ကျနော်ကဲ့သို့ ရောဂါအကြောင်းနားလည် ၍ အိမ်တွင် ဆက်လက်နေနေလျှင်ကိစ္စမရှိ၊ အပြင်ထွက်ခွင့်ရပြီဆိုကာ နယ်တကာလှည့်လျှင်မည်သူတာဝန်ယူမည်နည်း။
swab ယူရန်ကျနော်ပြောတိုင်း criteria နှင့်ညီမှ ယူမည်ဟုသာအဖြေရရှိခဲ့ ပါသည် ။ ထို criteria သည် တနယ်နှင့်တနယ်မတူတာလား။ swab ယူမယူ မည်သူဆုံးဖြတ်သလဲ သိချင်လှပါသည်။ ပေါက်ခေါင်းမှ မိသားစု ၊ မန္တလေးမှ မီနီအိုးဝေ ညီလေးတို့ကိုစစ်ဆေးပေးခြင်း များသည် မည်သည့် criteria နှင့်စစ်ဆေးပေးခြင်းကိုသိလိုလှပါသည်။ တီးတိန်လူနာ​၏ မိခင်သည် closed contact မဟုတ်ဘူးလား။ တီးတိန်လူနာ​၏ လက်ထပ်မည့်အမျိုးသမီးသည် closed contact မဟုတ် ဘူးလား ။ Case (16) နှင့် contact ဖြစ်ခဲ့သော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း (၂၅)ယောက်သည် တီးတိန်လူနာကိုရှာဖွေကုသခဲ့သော ကျနော်နှင့်ဘာများကွာခြားသလဲ သိပ်ကိုသိချင်လှ ပါသည် ။ ဖြေနိုင်သူများဖြေပေးကြပါ ။ ဖြေနိုင်မည်ထင်သည့်သူများထံကိုလည်း share ပေးကြပါ။ ကျနော်တင်ထားတဲ့ပုံထဲမှ Special consideration ဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလို တာလဲ ပြောပြပေးကြ ပါ။
ဒီနေ့ ၆ ရက်နေ့ဖြစ်နေပြီမို့ ဒီ Post ကိုတင်ရတာပါ။ မနက်ဖန် 7/4/2020 တွင် ကပ်တဲလ်ရွာမှ Home Q. ယူနေသူ (၃၆) ယောက်အိမ်ပြင်ထွက်လာကြပါတော့မည်။ ဆေးစစ်မှုတစုံတရာမလုပ်ဘဲ ဒီရွာ ကို ရောဂါ ကင်းရှင်းသည်ဟု ဘယ်သူအာမခံပြီး Lock down ဖြည်ပေးမလဲစောင့်ကြည့်ရပါတော့မည်။ ရွာကို ဆက်လက်ပိတ်ထားလျှင်လည်း တရွာလုံးကူးစက်ခံရတော့မည်။ ထို့အတွက် Facebook က ပြည်သူများကို အားကိုးပါသည် ။ အများ သိအောင် share ပေးကြပါ ။ ကျနော်မေးတာတွေလည်းဖြေနိုင်သူများဖြေပေးကြပါခမျာ။
From PhyoKyaw’s FB
အမြား သိအောငျ share ပေးကွပါ ။ ကနြျောမေးတာတှလေညျးဖွနေိုငျသူမြားဖွပေေးကွပါခမြာ။
ဒီနတေ့ော့ အမှနျ ကို အမှနျ အတိုငျးဖှငျ့ပွောဖှငျ့မေး ဖို့ အခြိနျတနျပွီမို့ ဒီ Post ကိုတငျ ပါတယျ… ဒီ Post ကွောငျ့ ထိခိုကျနဈနာသှားသူမြား ရှိလြှငျလညျး တခါထဲတောငျးပနျထားပါမယျ….
မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Covid-19 positive လူနာကို ခငျြးပွညျနယျ၊တီးတိနျမွို့နယျ၊ကပျတဲလျကြေးရှာတှငျ ကနြျော ဒေါကျတာဖွိုးကြျော ၏ UHC clinic မှ 19/3/2020 ရကျနတှေ့ငျစတငျတှရှေိ့ ခဲ့ ပါတ ယျ ။
၎င်းငျး ၁၉ ရကျနတှေ့ငျ ပဲ တီးတိနျ TMO ထံသတငျးပို့ပေးခဲ့ပါတယျ ။ တီးတိနျ TMO ၏ ညှနျကွားခကျြအတိုငျး လူနာကို Home Quarantine ထားခဲ့ပါတယျ။21/3/2020 တှငျ တီးတိနျဆေးရုံ သို့ လှဲပွောငျးပေး ခဲ့ပွီး ဆေးစဈမှုပွုလုပျခဲ့ရာ 23/3/2020 ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန၏ အဖွအေရ လူနာတှငျ Covid-19 ပိုးတှရှေိ့ရကွောငျးသိရှိရ ပါ သညျ ။
ထိုလူနာ Positive ဖွဈပွီဆိုတာနဲ့ ကနြျော ကိုယျတိုငျလညျး Home Q. (၁၄) ရကျကို ကလေးမွို့နအေိမျတှငျ ပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။ ထို့အတူ ကပျတဲလျကြေးရှာ ကိုလညျး အစိုးရက Lock down ခမြှတျပွီး ရှာကိုအဝငျအထှကျပိတျထားလိုကျ ပါသညျ ။ Positive လူနာနှငျ့ထိတှခေဲ့သူမြားကိုလညျး ကနျြးမာရေးဌာန မှ Home Q. (၁၄) ရကျစီခမြှတျပေးခဲ့ပါသညျ။
ထို Home Q. (၁၄) ရကျစီ ခမြှတျပွီးသျောလညျး ကနြျောအပါအဝငျ Positive လူနာနှငျ့ထိတှခေဲ့သူ Closed contact မြားအား swab test လုပျခွငျးတစုံတရာမပွုလုပျပေးခဲ့ပါ။ ကနြျောသညျ Home Q. (၁၄) ပွညျ့ပွီး အိမျအပွငျ ထှကျခှငျ့ရနသေျောလညျး ကနြော့ကို မညျသညျ့ ဆေးစဈဆေးမှုကိုမြှမပွုလုပျပေးထားသောကွောငျ့ မိမိ မိသားစုထံကိုတောငျ မပွနျရဲသေးပါ။ ထို့နညျးတူပဲ ရှာမှ Home Q. ယူနသေူ (၃၆) ယောကျ ကိုလညျး ဆေးစဈမှုတစုံတရာမပွုလုပျထားပါဘဲ ရောဂါကငျးရှငျးသညျဟုဆိုကာ မနကျဖနျ 7/4/2020 နတှေ့ငျ Home Q. ဖွုတျပေးပါတော့မညျ။ ထိုသူမြားသညျ ကနြျောကဲ့သို့ ရောဂါအကွောငျးနားလညျ ၍ အိမျတှငျ ဆကျလကျနနေလြှေငျကိစ်စမရှိ၊ အပွငျထှကျခှငျ့ရပွီဆိုကာ နယျတကာလှညျ့လြှငျမညျသူတာဝနျယူမညျနညျး။
swab ယူရနျကနြျောပွောတိုငျး criteria နှငျ့ညီမှ ယူမညျဟုသာအဖွရေရှိခဲ့ ပါသညျ ။ ထို criteria သညျ တနယျနှငျ့တနယျမတူတာလား။ swab ယူမယူ မညျသူဆုံးဖွတျသလဲ သိခငျြလှပါသညျ။ ပေါကျခေါငျးမှ မိသားစု ၊ မန်တလေးမှ မီနီအိုးဝေ ညီလေးတို့ကိုစဈဆေးပေးခွငျး မြားသညျ မညျသညျ့ criteria နှငျ့စဈဆေးပေးခွငျးကိုသိလိုလှပါသညျ။ တီးတိနျလူနာ၏ မိခငျသညျ closed contact မဟုတျဘူးလား။ တီးတိနျလူနာ၏ လကျထပျမညျ့အမြိုးသမီးသညျ closed contact မဟုတျ ဘူးလား ။ Case (16) နှငျ့ contact ဖွဈခဲ့သော ကနျြးမာရေးဝနျထမျး (၂၅)ယောကျသညျ တီးတိနျလူနာကိုရှာဖှကေုသခဲ့သော ကနြျောနှငျ့ဘာမြားကှာခွားသလဲ သိပျကိုသိခငျြလှ ပါသညျ ။ ဖွနေိုငျသူမြားဖွပေေးကွပါ ။ ဖွနေိုငျမညျထငျသညျ့သူမြားထံကိုလညျး share ပေးကွပါ။ ကနြျောတငျထားတဲ့ပုံထဲမှ Special consideration ဆိုသညျမှာ ဘာကိုဆိုလို တာလဲ ပွောပွပေးကွ ပါ။
ဒီနေ့ ၆ ရကျနဖွေ့ဈနပွေီမို့ ဒီ Post ကိုတငျရတာပါ။ မနကျဖနျ 7/4/2020 တှငျ ကပျတဲလျရှာမှ Home Q. ယူနသေူ (၃၆) ယောကျအိမျပွငျထှကျလာကွပါတော့မညျ။ ဆေးစဈမှုတစုံတရာမလုပျဘဲ ဒီရှာ ကို ရောဂါ ကငျးရှငျးသညျဟု ဘယျသူအာမခံပွီး Lock down ဖွညျပေးမလဲစောငျ့ကွညျ့ရပါတော့မညျ။ ရှာကို ဆကျလကျပိတျထားလြှငျလညျး တရှာလုံးကူးစကျခံရတော့မညျ။ ထို့အတှကျ Facebook က ပွညျသူမြားကို အားကိုးပါသညျ ။ အမြား သိအောငျ share ပေးကွပါ ။ ကနြျောမေးတာတှလေညျးဖွနေိုငျသူမြားဖွပေေးကွပါခမြာ။
အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်မည့်ရက် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောပြီ
COVID-19 ကိစ္စ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း အပြည့် အစုံ